Bulk CBG Go'doon | Qiimaha ugu fiican 2022
Jumlo Go'doon CBG By Redmperorcbd
Beeraha ubaxa hemp ee ugu wanaagsan CBG ee Ameerika waxay soo saaraan Jumlo/ Bulk CBG Go'doon. Oregon waxay soo saartaa qaar ka mid ah noocyada CBG ee ugu tayada sarreeya. Noocyadan ayaa ku habboon in laga soo saaro uruurinta sida CBG ceyriin, CBG distillate-ka buuxa, CBG ballaaran THC bilaash ah iyo CBG go'doomin.
Go'doominta CBG waxaa loo samayn karaa ku dhawaad ​​si la mid ah sida go'doominta CBD. Waxaan ku bilaabeynaa habka soo saarista CO2 si loo soo saaro saliidaha cayriin ee CBG, kuwaas oo ay ku badan yihiin CBGA iyo kuwa kale ee aan qaangaarka ahayn ee qaabka acidic ah. Marka xigta, waxaan saliidda ka saareynaa si aan uga saarno wax kasta oo dhumuc ah, lipids, iyo chlorophyll. Ka dib markii CBG distillate la dhammeeyo, waanu "burburinnaa" wixii haray crystals CBG saliidda. Tallaabada ugu dambeysa waa in meesha laga saaro terpenes/cannabinoids. Roto-vap waa tallaabada ugu dambeysa. Tani waxay meesha ka saaraysaa wax kasta oo dareere ah oo hadhsan waxayna hubisaa in alaabtu ka xorowday biraha culus, sunta cayayaanka, iyo microbial. Natiijooyinkan ayaa markaa lagu xaqiijiyaa laba shaybaar oo qolo saddexaad ah.
Sida loo Isticmaalo Go'doominta CBG Tilmaamaha Iibsadaha oo faa'iido leh
Beeraha ubaxa hemp ee ugu wanaagsan CBG ee Ameerika waxay soo saaraan Go'doon CBG Jumlo ah. Oregon waxay soo saartaa qaar ka mid ah noocyada CBG ee ugu tayada sarreeya. Noocyadani waxay ku habboon yihiin in laga soo saaro meelaha sida CBG ceyriin, CBG-ga buuxa ee distillate, CBG ballaaran THC bilaash ah iyo CBG go'doomin.
BULK CBG go'doomin
Go'doominta CBG waxaa loo samayn karaa ku dhawaad ​​si la mid ah sida go'doominta CBD. Waxaan ku bilaabeynaa habka soo saarista CO2 si loo soo saaro saliidaha cayriin ee CBG, kuwaas oo ay ku badan yihiin CBGA iyo kuwa kale ee aan qaangaarka ahayn ee qaabka acidic ah. Marka xigta, waxaan saliidda ka saareynaa si aan uga saarno wax kasta oo dhumuc ah, lipids, iyo chlorophyll. Ka dib markii CBG distillate la dhammeeyo, waxaanu "ku shil" wixii ka soo hadhay kiristaalo CBG ee saliidda. Tallaabada ugu dambeysa waa in meesha laga saaro terpenes/cannabinoids. Roto-vap waa tallaabada ugu dambeysa. Tani waxay meesha ka saaraysaa wax kasta oo dareere ah oo hadhsan waxayna hubisaa in alaabtu ka xorowday biraha culus, sunta cayayaanka, iyo microbial. Natiijooyinkan ayaa markaa lagu xaqiijiyaa laba shaybaar oo qolo saddexaad ah.
Sida Loo Isticmaalo CBG Isolate Tilmaamaha Iibsadaha Waxtarka leh
Inkastoo CBG aan si weyn loo aqoon waayadii hore, cannabigerol (CBG), hadda waa cannabinoid caadi ah. CBG waa hal cannabinoid oo leh awood la yaab leh oo lagu maareeyo xaalado badan, sida sonkorowga, niyad-jabka, suuxdinta, iyo kuwa kale. Badeecadaha CBG ayaa si aad ah loogu baahan yahay. Iibka alaabta CBG ayaa sidoo kale sii kordhaya. Dadku way qaldamaan CBG ee. Si kastaba ha ahaatee, labaduba way kala duwan yihiin. CBG iyo CBD waa Cannabinoid. Si kastaba ha ahaatee, CBG way kala duwan tahay oo ku filan inay lahaato suuq u gaar ah alaabta CBG.
Waa maxay Go'doominta CBG?
CBG go'doonsan waa foom CBG saafi ah (ku dhawaad ​​98% CBG) waxaana si fudud loogu dari karaa badeecad kasta. CBG waa soosaar ka mid ah xagasha dhirta. Si loo helo CBG saafi ah, dhammaan walxaha kale waa la tirtiray. CBG ee tayada sare leh waxay ka kooban tahay heerar hoose iyo walxaha kale ee raadraaca. Go'doominta CBG waa doorashada ugu fiican kuwa raba inay ka fogaadaan THC laakiin weli goosanaysa faa'iidooyinka caafimaad ee cannabinoids.
Bulk CBG Go'doomin iyo Bulk CBD Go'doon
CBD iyo isticmaalkeeda daawaynta/daawaynta waa la xaqiijiyay. CBG wuxuu leeyahay qaar la mid ah. Labaduba wax sare ma keenaan.
CBD iyo CBG labaduba waxay kaa caawin karaan yaraynta cudurrada maskaxda iyo jidhka sida walaaca, walbahaarka, iyo niyad-jabka. CBD ayaa la muujiyay inay waxtar u leedahay ka-hortagga suuxdinta. CBD, oo ah dawada ay FDA ogolaatay ee lagu daweeyo suuxdinta carruurta ayaa sidoo kale la xaqiijiyay inay waxtar leedahay. CBG, si kastaba ha ahaatee, waxa ay awood u leedahay in qaybta dawooyinka loogu isticmaalo qalalka. Cilmi-baaristii ugu horreysay waxay soo jeedinaysaa in tani ay sidoo kale tahay xaaladdu. CBG waa mid kale oo weyn oo dheeri ah cannabinoids nonpsychoactive.
CBG is dhexgal oo leh receptors CB1 iyo CB2. Labaduba waxay ku jiraan nidaam kasta oo biniaadmi ah. CB1 reseptors waxay ku badan yihiin neerfayaasha bini'aadamka iyo CB2 ee habka difaaca jirka. CBG waxay nidaamin kartaa hawlo badan oo jidhka ah waxayna maareyn kartaa xaalado caafimaad oo kala duwan.
Tijaabada go'doominta ee CBG
Bulk CBG Go'doomin iyo Isticmaalkeeda
Go'doominta CBG waa mid ka mid ah alaabada hemp-ka ee kala duwan. Go'doominta CBG waxay la mid tahay go'doominta CBD. Isticmaaladan qaarkood ayaa hoos ku taxan.
Go'doominta CBG waxaa lagu dari karaa kaabsal, kiniinno, iyo alaabooyin kale.
Alaabooyinka la mariyo ee CBG, sida kiriimyada iyo labeennada ay ku jiraan CBG, ayaa noqda kuwa caan ah. CBG ayaa noqonaysa mid caan ah waxaana jira fursado badan oo wax soo saarka CBG ee suuqa.
Go'doominta CBG sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo saliid CBG. Go'doominta CBG waa CBG saafi ah. Sidaa darteed way fududahay in la xisaabiyo qiyaasta iyo awoodda CBG marka la diyaarinayo alaabta.
Go'doominta CBG waxaa loo isticmaali karaa in lagu kordhiyo awoodda Tinctures CBG/CBD.
Jaantuska Kiimikada ee CBG ISOLATE
Wadarta Xashiishadda Cannabinoid: 95-99+%
Qiyaasta THC: 0% THC
Midabka: Budada cad ee saafiga ah
Muuqaal: Crystalline Powder
Baakadaha: Waxaa lagu iibiyaa 100 garaam oo badan iyo 1 Kilogram oo litir ah
Life Life: 18 bilood oo aan furnayn. Ku kaydi meel qabow oo mugdi ah
Unugyada molecule: C21H3202
Miisaanka Molecule: 315.5 g/mol
Goobta dhalaalka: 126 F (62 C)
Barta Ku Karkarinaysa Bulk CBD Go'doon: 220 F (185 C)
qiimeyn la'aan ku saleysan 0 votes
Waxaa laga heli karaa keydka
Boorsada dhabarka ee aan xabadu karin ee hore iyo gadaal
Suuqa Terpene 2022
Waxaa laga yaabaa 22, 2022
Wakiilka Freak Nasty Isbuuciiba Intel Warbixinta Dhaqdhaqaaqa Pincer
Waxaa laga yaabaa 8, 2022
CBD waxay tusinaysaa Kartida ay kaga hortagto caabuqa Unugyada Covid-19 oo ay ka noqoto Saamaynta Fayraska
Saamaynta Soo-jiidashada & Terpenes